Isitshalo esineqabunga eliyisitshalo liyisitshalo esingapheli esine-blue tint futhi singafinyelela ngamasentimitha angu-80 ukuphakama. Impande yawo iqondile futhi iyigugu, isiqu sihlanganiswa, singabonakali, inhlabathi ngokwayo iyiluhlaza. Amaqabunga alesi sitshalo anesimo esixubile, ama-dentate, isikhumba esinamaqabunga nesibindi. Izimbali zine-panicles ze-blue hue. Zifana nezinhloko ze-oval, zizungezwe amaqabunga e-spiny kodwa hhayi amaqabunga amakhulu. Abantu bayibiza ngokuthi i-blue headhead-aaved - i-blue bush.
Ukwakhiwa kwamakhemikhali wesitshalo
Isihlahla somuntu esineqabunga esinezitshalo sinokubunjwa okuyingqayizivele. Lokhu kuchaza izindawo eziwusizo zesitshalo. Izinto ezinjalo zokusetshenziswa zivame ukusetshenziswa emithi yokwelapha. Kwaphela amakhulu eminyaka, lesi sitshalo sibonile. Kodwa-ke, ukubunjwa kwekhokho elihlaza kweqabunga elihlaza okwesibhakabhaka akukafundwanga ngokugcwele okwamanje. Iqukethe le vithamini C isitshalo, i-sucrose, i-fructose, i-glucose, i-tannins, amafutha abalulekile, i-glycolic, i-malonic, i-oxalic, i-citric kanye nama-acic malic, ama-phenolcarbon, ama-tannides, ama-polysaccharides, ama-flavonoids, ama-saponins.
I-phylogeny ene-blue-headed, izakhiwo zemilingo ezenziwa abagulayo basendulo, ikuvumela ukuba ususe izifo eziningi. Lesi sitshalo sine-antitoxic, astringent, i-anticonvulsant, isenzo se-antibacterial. I-artillery ehamba ngezintambo ihlanzekile ngegazi, i-expectorant, i-diaphoretic, i-diuretic, i-analgesic, ibuyisela futhi ivuselela.
Lapho isitshalo sisetshenziswa khona
Ngeziphi izifo ongazisebenzisa ngayo umuntu ophahlazekile? Izakhiwo zokuphulukisa zalesi sitshalo zenza kube lula ukusebenzisa izidakamizwa ezisekelwe kuso ngenxa yokwelapha kwezifo eziningi. Ukulungiswa okusekelwe ezintweni ezinjalo kungakwelapha izinkinga ezihlukahlukene zesifo, ikhanda lokushona, ukulala, ukuthuthumela, ukukhathazeka nokukhathazeka. Ukunqunywa kwegazi nokugcoba okusetshenziselwa ukuhlanza kusetshenziselwa ukukhulula amazinyo, ukuqeda i-stomatitis, kanye nenqubo yokuvuvukala, etholakala endaweni ye-mucosa yomlomo. Ngaphezu kwalokho, kuvame ukusetshenziselwa ukulwa nama-tia, ama-seizures, i-anemia ne-anemia.
Kufanele kuqaphele ukuthi lesi sitshalo sisiza izingane. Ikakhulukazi uma ingane ine-diathesis. Ukulungiswa kwalesi sitshalo kusetshenziselwa ukwelapha isifo sofuba, i-cardioneurosis kanye nezifo zenhliziyo ezihlukahlukene, kanye ne-tonic kanye ne-anesthetic. I-arachnoid ikuvumela ukuthi ususe amatshe kusuka kumchamo, izinyosi nezinso, izifo zesibindi zesilonda, izinso zesifo nesisu, kanye ne-colic.
Lesi sitshalo sibhekane kahle nezifo zamajoyina, i-rheumatism, i-rickets, i-arthritis nama-hemorrhoids, kanye nezifo zesikhumba, isibonelo, nge-dermatosis, i-edema, i-jaundice, i-scrofula ne-dropsy. Ungakhohlwa ukuthi i-cynomolgus inomphumela we-antitoxic, okuvumela ukuyisebenzisa ngezinhlungu ezihlukahlukene. Lesi sitshalo sisiza umzimba ukuthi ususe ngisho nenhlungu yenyoka.
Amalungiselelo asekelwe ngama-sapwood amaqabunga amaqabunga asetshenziselwa ukwelapha i-asthma, pertussis, ukukhwehlela okuqhubekayo, i-tracheitis, i-bronchitis, kanye nezinye izifo zamaphaphu nesistimu yokuphefumula. Isitshalo sisetshenziselwa ukwelashwa kwe-scrofululosis, i-spasmophilia, i-ascites, i-fever. I-anthrax ithinta umzimba, iqeda ubuhlungu esiswini nesifuba. Ivame ukusetshenziselwa njenge-diuretic, kanye ne-stasis yegazi.
Kumele kuqaphele ukuthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezisekelwe kulesi sitshalo kungandisa ukondliwa komama ubisi nokuqinisa esikhathini. Kubantu, ikhanda elihlaza okwesibhakabhaka liyasiza futhi. Kuvame ukucubungula izinqubo ze-prostate gland.
Ezinye zokupheka zemithi yabantu
Ukuze ukulungiswa kwemithi, izimpande, izimbali, iziqu kanye namaqabunga okutshala ngokuvamile kuvame ukusetshenziswa. Ukuze uphulukise isifo sofuba, kuyadingeka ukuthatha ijusi le-bluehead nge-spoon-topped flat, mhlawumbe kathathu ngosuku. Lesi sidakamizwa kufanele sihlanjululwe ingxenye yengilazi yamanzi ngaphambi kokusetshenziswa. Ungangezela uju kancane ekuphuzeni.
Ukubhekana nezinyosi, nokuvimbela inqubo yokuvuvukala emgodini womlomo, ungasebenzisa isisombululo sokuhlanza. Ukwenza, udinga ukugcwalisa ingilazi ye-high quality vodka nge isipuni sesitshalo namaqabunga ekhanda elihlaza okwesibhakabhaka. Sebenzisa umkhiqizo kuphela emva kokuxubha amazinyo akho.
Sitshala kusuka ku-sciatica ne-migraine
Umlimi we-blue-headed usetshenziswa nge-radiculitis, i-migraine, i-osteochondrosis namazinyo. I-extract ingalungiswa kusuka kulolu sitshalo. Ukuze wenze lokhu, izinhlamvu ezine ezinkulu zamaqabunga, iziqu nezimbali zekhanda elihlaza okwesibhakabhaka kufanele zigcwaliswe ngamanzi alitha. Isitsha esinezidakamizwa kufanele sibekwe emlilweni bese siswa emathunjini. Ngemuva kwalokhu, i-½ ekhulayo yomsindo wokuqala. Umkhiqizo oqediwe kufanele uhlungiwe kwisitsha sombukiso omnyama. Ungasebenzisa ukukhipha kathathu ngosuku ngamaconsi angu-20-25. Usuku lokuphelelwa yisikhathi sendawo enjalo ngu-1.5 iminyaka. Ungagcina ukukhishwa esiqandisini.
Umlimi ophuthumayo, ogama lakhe libanzi kakhulu, njengalokhu kunoma yiluphi ulwazi oluhlaza, lunokuphikisana. Ochwepheshe abaphakamisi ukusebenzisa izidakamizwa ngesisekelo ngesikhathi sokulahlwa, ukukhulelwa kanye nokuya esikhathini. Kuyinto engathandeki ukuthatha imithi evela kulesi sitshalo kulabo abanesifo somfutho wegazi ophezulu. Kubalulekile ukuphawula ukuthi abanye abantu banokungaboni ngaso sonke isikhathi. Lona olunye ukuphikisana.
Lysippos - ebaziwe WaseGrisi wasendulo, futhi imisebenzi yakhe
Ukukhipha isisu kanjani. Ukukhulelwa Ngemva Kokukhipha Isisu.